Products-1 Factory - Shiinaha Products-1 Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
sheybaarka 1000W ultrasound probe homogenizer
Isugeynta Ultrasonic waa geedi socod farsamo si loo yareeyo walxaha yar yar ee dareeraha ah si ay si isku mid ah u noqdaan kuwo yar yar oo siman loo qaybiyo. Marka falanqeeyayaasha ultrasonic loo adeegsado inay yihiin kuwo isku mid ah, ujeedadu waa in la yareeyo walxaha yaryar ee dareeraha ah si loo hagaajiyo isku midnimada iyo xasilloonida. Qaybahaas (kala firdhi wajiga) waxay noqon karaan adkaansho ama cabitaanno. Hoos udhaca dhexroorka celceliska qaybaha wuxuu kordhiyaa tirada shakhsiyaadka shakhsiga ah. Tani waxay keenaysaa hoos u dhac celcelis ahaan par ...
20Khz ultrasonic faafiya mashiinka homoegnizer
Isugeynta Ultrasonic waa geedi socod farsamo si loo yareeyo walxaha yar yar ee dareeraha ah si ay si isku mid ah u noqdaan kuwo yar yar oo siman loo qaybiyo. Marka falanqeeyayaasha ultrasonic loo adeegsado inay yihiin kuwo isku mid ah, ujeedadu waa in la yareeyo walxaha yaryar ee dareeraha ah si loo hagaajiyo isku midnimada iyo xasilloonida. Qaybahaas (kala firdhi wajiga) waxay noqon karaan adkaansho ama cabitaanno. Hoos udhaca dhexroorka celceliska qaybaha wuxuu kordhiyaa tirada shakhsiyaadka shakhsiga ah. Tani waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada celceliska pa ...
20Khz qalabka nano ultrasonic kala firidhsan homogenizer
Isku darka budada dareeraha ayaa ah talaabo guud oo lagu sameeyo sameynta alaabooyin kala duwan, sida rinjiga, khad, shaambo, cabitaano, ama warbaahinta wax lagu nadiifiyo. Qaybaha shakhsiga ah waxaa isku haya xoogagga soo jiidashada ee dabeecadaha jirka iyo kiimikada kala duwan, oo ay ku jiraan xoogagga van der Waals iyo xiisadda dusha sare ee dareeraha ah. Saameyntani waxay ka xoog badan tahay dareerayaasha nafwaayay ee sareeya, sida polymer ama resins. Xoogagga soo jiidashada waa in laga adkaadaa si loo deagglomerate loona kala firdhiyo walxaha li ...
Mashiinka sonochemistry Ultrasonic ee daaweynta dareeraha
sontarka sonkorta ee loo yaqaan 'lt ultrasonic sonochemistry' waa adeegsiga ultrasound-ka ee fal-celinta kiimikaad iyo geeddi-socodka. Habka keena saamaynta sonochemical ee dareeraha ayaa ah ifafaalaha cavitation acoustic. Cavitation-ka loo yaqaan 'Acoustic cavitation' waxaa loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan sida kala firdhinta, soo saarista, emulsification, iyo homogenization. Marka laga hadlayo dhanka wax soosaarka, waxaan haysanaa qalab kaladuwan si aan ula kulano soosaarka qeexitaano kaladuwan: min 100ml ilaa boqolaal tan oo xariiqyo waxsoosaar warshadeed ah. KHATAR ...
Qalajiye kala firidhsan Ultrasonic
Codsiyada isku dhafan badanaa waxaa ka mid ah kala firidhsan, isudheellitirka, emulsification, iwm. Ultrasound wuxuu si wax ku ool ah isugu dari karaa waxyaabo kala duwan oo leh xawaare sare iyo cavitation xoog leh. Ultrasonic mixers loo isticmaalo isku darka codsiyada waxaa badanaa lagu gartaa isku darka alaabada adag si loo diyaariyo kala firidhsan isku mid ah, depolymerization of Qurub si loo yareeyo cabbirka, iwm. -BL20L Joogtaynta 20Khz 20Khz 20Khz Powe ...
Soo saarista Ultrasonic waxay ku saleysan tahay mabda'a cavitation acoustic. Ku dhexgalida baaritaanka ultrasonic ee dhirta dhirta dhirta ama xal isku dhafan oo xididdada dhirta, jirridaha, caleemaha, ubaxyada iyo dareeraha cagaaran waxay sababi karaan cavitation xoog leh iyo xoog xiirid. Burbur unugyada dhirta oo sii daa walxaha kujira. JH waxay bixisaa khadadka soo saarista Xiinka warshadaha ee miisaanka kala duwan iyo qaabab kala duwan. Kuwa soo socdaa waa xuduudaha qalabka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Haddii aad u baahan tahay baqdin ka ballaaran ...
Qalabka isku dhafka dareeraha Ultrasonic
3000W qalabka kala-baxa ultrasonic
Nidaamkan waxaa loogu talagalay waxsoosaarka dareeraha dareeraha nafwaayaha ah ee yar yar, sida saliidda CBD, kaarboonka madow, nanotubes kaarboon, graphene, dahaarka, qalabka tamarta cusub, alumina, farsamaynta nanoemulsions.
Homogenizer sonicator kala firidhsan Ultrasonic
Isugeynta Ultrasonic waa geedi socod farsamo si loo yareeyo walxaha yar yar ee dareeraha ah si ay si isku mid ah u noqdaan kuwo yar yar oo siman loo qaybiyo. Sonicators waxay ku shaqeeyaan iyagoo abuuraya hirar xoog leh oo sonic ah warbaahinta dareeraha ah. Mawjadaha cadaadisku waxay keenaan qulqulka dareeraha iyo, xaaladaha ku habboon, sameynta deg degga ah ee gooba-baxa yar-yar oo kora isla markaana is-urursada illaa ay ka gaadhayaan cabbirkooda, u gariirayo si xoog leh, aakhirkana u burburaya. Dhacdadan waxaa loo yaqaan 'cavitation'. Faahfaahin ...
Codsiyada qalabka wax soo saarka dareeraha ee ultrasonic waxaa ka mid ah isku darka, kala firdhinta, yareynta cabbirka walxaha, soo saarista iyo falcelinta kiimikada. Waxaan siinaa qaybaha warshadaha kala duwan, sida nano-qalabka, rinjiga & midabbada, cuntada & cabitaanka, qurxinta, kiimikooyinka iyo shidaalka.
Ultrasonic Sheybaarka Homogenizer Sonicator
Sonication waa ficil lagu dabbaqayo tamar dhawaq si looga xanaaqo walxaha ku jira muunad, ujeeddooyin kala duwan. Sonicator Ultrasonic homogenizer wuxuu carqaladeyn karaa unugyada iyo unugyada iyada oo loo marayo cavitation iyo hirarka ultrasonic. Asal ahaan, homogenizer ultrasonic wuxuu leeyahay caarad si dhakhso leh u gariirisa, taasoo keenta goobooyin xalka ku xeeran si deg deg ah u sameysmo oo u burburo. Kani wuxuu abuuraa hirar iyo hirar naxdin leh oo kala daadiya unugyada iyo qaybaha. Ultrasonic Homogenizer sonicator waxaa lagula talinayaa in la midoobo ...